MaSouth Africa Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(423 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
South Africa imwe yenharaunda dzakanakisisa dzevhejeri vanoshanda. Asi ikozvino paIndaneti kubhejera munyika kunonyanya kuderera, uye imwe nguva yapfuura uye kazhinji yakarambidzwa.
Top 5 inonyanya kuwanikwa mumakasitoni eIndia muSouth Africa
Pasi pemutemo wakasimba, kubhejera kwakawira mu 1992. Kuregererwa kwega kwebhizimusi iyi kunonzi 1994, apo hurumende itsva yeSouth Africa yakagadzirisa kushandiswa kwekubhejera mutemo, kutonga kubhejera mumakasitositi epasi, pamwe nekubheja kwemitambo nekubheja pamisasa yebhiza paInternet. Zvichigadziriswa zvakatanga kushanda chete mu1996.
Kunyange zvakadaro, nhasi vanhu vekuSouth Africa vanogona kutamba vasingatauri kune dzimwe nzvimbo dzepaIndaneti dzemakambani eInternet, pasinei nokuti iyo inonzi isiri pamutemo. Nzvimbo dzakawanda dzekuInternet, pasinei nekurambidzwa, dzinoramba dzichigamuchira vatambi vanobva kuSouth Africa, vachivapa mukana wekutamba muSouth African ranks (R).
Kukurukurwa kwemutemo kunoshandurwa kwehutano hwehurumende yeSouth Africa iri kuenderera mberi. Zvinotarisirwa kuti munguva pfupi yekambani dzekombiyuta dzichiri kunyoreswa. Ive ichangobva kuziviswa kuti hurumende yeRepublic of South Africa yakabvuma kupa 10 zvikwata zvekambani dzemuInternet. Izvi zvingava danho rinokosha rekufambiswa kwemabhizimisi munzvimbo iyi. Zvisinei, panguva ino malayisensi aya achiri kushandiswa.
Kambani Slotegrator, iyo ine ruzivo rwakawanda semugovera uye mupivhiri mumutambo wekubhejera paIndaneti, yakaita svondo rekutsvaga kwemasitadhi ekubhejera zvikuru kupfuura ose kubva kuSouth Africa. Kubva pane izvi, nyanzvi dzakaita nhamba yeiyo 10 inonyanya kuzivikanwa makasitositi eSouth African online.
Rwokutanga rwe10 South Africa Online Casino Sites
Kubhejera bhizinesi muSouth Africa kunotenderwa kubvira 1994. Maitiro ese ekubhejera anonyoreswa zviri pamutemo, kunze kwenzvimbo yepamhepo. Kubheja mitambo chete uye kubheja kumhanyisa mabhiza zvinotenderwa online. Makasino anopfuura makumi mana anoshanda muSouth Africa. Kasino yakawanda iri muJohannesburg, dunhu reGauteng Kune mana makuru macasino, ayo ese pamwe chete ane anopfuura zana nemakumi masere ematafura emitambo yemakadhi, anopfuura zviuru mazana mashanu nemazana maviri emuchina uye vhidhiyo poker
Photo source: Nhau dzeKubhejera
Iyo huru kasino GrandWest Casino & Varaidzo Nyika iri muCape Town. Kune matafura makumi manomwe nemapfumbamwe emitambo, gumi poker matafura, anopfuura 79 slot michina uye vhidhiyo poker.
Mazita anozivikanwa zvikuru emakosinos eSouth Africa:
Tsogo Sun inobata 14 malayisensi;
Sun International - gumi nematanhatu marezinesi;
Peermont Global - 8 marezinesi;
London Clubs International - 1 rezinesi;
Mari dzinobva mukubhejera muSouth Africa dzinoramba dzakada kufanana uye dzinoyerwa mumabhirioni eRandi reSouth Africa. Pamari yemari ya2015-2016 yakazara kubva kubhizimusi repamutemo kubhejera yakaenzana neZAR 26.3 bhiriyoni kana USD 1.86 bhiriyoni Mari hombe inounzwa nekasino - 70.5% yemari inowanikwa.
Panguva imwecheteyo, vazhinji vevatambi vanotora chikamu muhotera yenyika - 78.9%. Chete 10.6% inotamba mukasino. Makota matatu evagari akambotora chikamu mune chero kubhejera. Vanopfuura hafu yevagari vanofunga makasino kana kubhejera inzira yakakodzera yekuronga zororo.
Tsanangudzo pfupi yeSouth Africa
South Africa iRepublic of South Africa, reparamende republic yekumaodzanyemba kweAfrica. Ino ndiyo nyika yakasimukira kwazvo mukondinendi uye yega nyika yeAfrica mune iyo G20 (iyo "Makumi Makumi Makuru").
Nyika inoziva mitauro gumi neimwe yenyika, ine vachena vazhinji, veAsia nevanhu vatema. Wekutanga kuunganidza maDutch muna 11. South Africa ine hupfumi hwapfuura - muzana ramakore rechi1652 Hondo dzeAnglo-Boer dzakarwirwa mangoda negoridhe, muzana ramakore rechi19 pakange paine rusaruro rurefu. Zvese izvi zvakasiya chiratidzo pamamiriro ekusimudzira bhizinesi, hupfumi, uye nzanga.
Mari yacho irandi reSouth Africa, rinoratidzirwa neZAR kana R. Chiyero munaDecember 2016 chiri USD 0.0709 yeZAR 1 kana ZAR 14.1 yeUS USD 1.
Nyika inonyanya kutengesa mangoda, goridhe, platinamu, michina nemidziyo. Kunze - mafuta uye zvigadzirwa. South Africa iri pachinzvimbo che39 pachinzvimbo chenyika uko kuri nyore kuita bhizinesi.
Nhoroondo yekubheja muSouth Africa
Bhizimusi rekubhejera muSouth Africa rakarambidzwa kusvika 1994. Mutemo, unonzi South Africa Gambling Act, wakatorwa muna 1965, wakarambidza marudzi ese ekubhejera, kunze kwemijaho yemabhiza. Ivo vaizivikanwa semutambo.
Makasino asiri epamutemo akatanga kusimukira kubvira kuma1970 apfuura. Ivo vakashanda kuma bantustans Boputatsvan, Siskey, Transkei, Venda.
Bantustans - chakakosha chiitiko munhoroondo yeSouth Africa. Izvo zvakada kufanana nekuchengetedza muUS, asi zvine hunhu hwazvo. Iyi ndiyo ndima yaishandiswa senzvimbo yekuchengetera verudzi rwevatema vemuSouth Africa. Mamwe mabantustans akawana rusununguko, uye izvi zvakaita kuti zvikwanise kuronga bhizimusi rekubhejera. Semuenzaniso, muBophuthatswane yakavaka guta-kasino Sun City.
Marudzi eSouth Africa chete ndiwo aigona kugara mumabantustans, uye vagari vazhinji vaisakwanisa kupinda zviri pamutemo mumasangano aya. Zvakangodaro, pakasvika 1995 pakanga paine anenge 2000 macasino munyika.
Pakaperera rusaruro muna 1994, uye hurumende yezvematongerwo enyika payakatanga kutonga, marudzi ese ekubhejera akagadziriswa. Mutemo weNational Gambling Act, uyo wakapihwa mu1996, wakabvumidza rezinesi rekasino uye lottery yenyika. Mujaho wemabhiza wakazivikanwa zvakare senzira yekubhejera.
Mutemo wekubheja muSouth Africa
Iyo zera muganho wemutambi South Africa makore gumi nemasere. Vana vadiki havana mvumo yekutamba munzvimbo dzekubhejera.
Pane zviito zvitatu zvinotsanangura mutemo wekubhejera muSouth Africa:
National Gambling Mutemo we1996;
National Gambling Act 2004 - inozadzisa yapfuura;
National Gambling Amendment Mutemo 2008, iyo inosarudza nzvimbo yebhizimusi yekubheja.
Mutemo weNational Gambling Act wa1996 unotsanangudza zvakajeka kuti marezinesi ecasino anofanira kugoverwa sei pakati pematunhu enyika. Huwandu hwese emarezinesi zvidimbu makumi mana. Dzinogoverwa seinotevera:
Dunhu reWestern-Cape (pakati - Cape Town) - marezinesi mashanu;
North-Cape dunhu (Kimberley) - 3;
Dunhu reEast-Cape (Bisho) - 5;
North-Western Province (Mafeking) - 5 marezinesi;
Limpopo kana Northern Province (Polokwane) - marezinesi matatu.
Maererano nebasa rimwe chete, hapana sangano (sangano kana munhu) ane kodzero yekubata zvinopfuura maCCNI mabhizimisi epasino munyika yose kana kupfuura zvikwangwani zve 16 mune imwe nzvimbo yepurovhinzi.
Mutemo weNational Gaming Act unotsanangura kuti:
iro rinoreva kubhejera;
maitiro ekushanda kweBhodi Yenjere Yenyika.
Vatongi vekubhejera muSouth Africa
National Gambling Board - iyo nyika mutongi wekubhejera muSouth Africa. Mabasa emutongi anosanganisira:
sarudza mitemo iyo bhizimusi rekubheja rinoshanda;
ane mutoro wekutarisira kwakakodzera kubhejera.
The South African Bureau of Standards inokonzera kumira, kuongororwa, kuongorora, kugadziriswa uye kugadzirwa kwemichina yemitambo, magetsi ekugadzirisa zvirongwa uye zvimwe zvigadzirwa zve casino.
Kune mumwe mutambi mubhizimusi rekubhejera muSouth Africa - iyo Casino Association yeSouth Africa (CASA). Sangano rakavambwa muna 2003.Mabasa akakosha esangano:
kubatanidza casino operators uye vagovana;
kupa humwe ruzivo pamusoro pekambani kuvanhu;
kuti vabudirire kunzwisisa nokunzwisisa kwekubheja bhizinesi.
Sangano rinobatanidza angangoita macasino ese emunyika. Vamiriri vehurumende pachayo vanobata 37% yezvikamu zvemakasi akasarudzika-epasi. Nhengo dzesangano dzinopa anopfuura zviuru zana zvemabasa.
Mutemo wekubhejera paIndaneti muSouth Africa
Iyo National Gambling Amendment Act ya2008, iyo kusvika parizvino isati yapedzwa, inoona bhizinesi repamhepo kubhejera muSouth Africa zvisiri pamutemo. Zvakaenzana zvisiri pamutemo sesangano repamhepo kubhejera, uye kutora chikamu mazviri. Pamwe - nekuti haazi ese marudzi ese ekubheja epamhepo anorambidzwa.
Mutemo unorambidza zvinonzi "mitambo yekudyidzana":
mitambo yokubheja paIndaneti;
kubheji pamabhiza emabhiza online;
uye kazhinji bhizimusi revabhuki. Nomuzvarirwo, murongi weCC anofanira kunge aine rezinesi kubva kuhurumende.
Nyaya ipi zvayo, ingava sangano we webhusaiti kana bhangi rinotengesa kubhejera paIndaneti, rinorayirwa nehomwe yeR 10 mamiriyoni (USD 709 zviuru) uye / kana makore 10 ejeri nguva.
Zvisinei, mutemo haupi chirango kune mumwe mutambi. Kubva izvi zvinotevera kuti vatambi vanogona kutamba mukasino, vane maseva anoiswa kunze kwenyika.
Mitambo yekubhejera muSouth Africa
Bhuku Rokubhejera Rwenyika rinoita zvinotevera zvekubhejera nokuda kweakaunti yacho:
kasino - bhodhi mitambo uye slots;
mitambo pamabhiza emabhiza nemitambo, izvo zvinowanikwa mubhuku remabhuku uye sweepstakes;
makemikari asingakwanisi kubhadhara mabheji nemikomborero -Imitemo Payout Machines (LPM);
Bingo-tsika uye pamagetsi ekupedzisira (Electronic Bingo Terminals, EBT).
South African casinos inopa mitambo yakasiyana-siyana yemakadhi, inozivikanwa kwete yeEurope chete, asi yeAfrica ye South Africa.
Semuenzaniso, muCape Town mutambo unozivikanwa zvikuru klawerjas (klawerjas) - mutambo wekare wechiDutch une chiokomuhomwe, uchiri mukurumbira muNetherlands. Chinangwa ndechekutora huwandu hwakakwana hwechiokomuhomwe.
Mutambo Kaluka (kalookie) - rudzi rummy. Chinangwa ndechekuchaira mamwe mabatanidzwa.
Thuni (Thuni kana Thunee) mutambo unowanzoitika muSouth Africa. Chaizvoizvo, inozivikanwa nevanhu veAsia. Mitemo yemutambo inodawo kuti iwe uwane imwe nhamba yemapoinzi.
Mimwe mitambo inozivikanwa muSouth Africa:
bhirikiti igadhi reChirungu;
canasta (canasta) - rudzi rhammi;
samba (samba) - musiyano weiyo canal;
skat (skat) - mutambo wechiokomuhomwe kubva kuGerman;
katsi nemakonzo (zvisineyi neMarice) - chimiro chemakwikwi tapeworm;
shithead (shithead) - mutambo wekurasikirwa nemakadhi ese.
Mitsva inobva kubheja bhizinesi muSouth Africa
Nekubhadhara mari 2015-2016 mari yakawanda kubva kubhizimisi rezvemutemo yakabhadhara ZAR 26.3 bhiriyoni kana USD 1.86 bhiriyoni.
Mari hombe inounzwa nekasino - 70.5% yemari yakazara kana USD 1.3 bhiriyoni;
mushure mavo pane zviyero - 16.9% kana USD 315 mamirioni;
kozoti LPM (Yakatemerwa Kubhadhara Machina, michina ine mashoma mashoma kubhadhara - 9.0% kana USD 167 mamirioni;
panzvimbo yechina bhingo - 3.6% yemari yakawandisa kana madhora makumi matanhatu nematanhatu emadhora.
Mapurisa anounza mari yakasiyana-siyana kubva kubhejera:
Indasitiri yekubhejera mudunhu reGauteng inowana zvakanyanya - 40% kana USD 745 mamirioni mune yemari 2015-2016;
nzvimbo yechipiri inotarirwa nedunhu reWestern-Cape -15.6% kana USD 291 mamiriyoni;
nzvimbo yechitatu inotorwa neKwaZulu-Natal - 18.5% kana USD 344 mamirioni.
Gauteng inogadzira mari yepamusorosoro mumakasino, mateki uye bhingo. Mari yepamusoro soro muchikamu cheLPM inogamuchirwa nedunhu reWestern-Cape - 30%.
Huwandu hwemuchina wekugezesa mumacasino eSouth Africa-akavakirwa mu2015 aive 23,415. Mari inowanikwa kubva pamatope - USD 969 mamirioni
Huwandu hwematafura mu2015 mune ese makasino munyika aive zvikamu makumi mapfumbamwe nematatu. Mari kubva kwavari madhora 932 miriyoni.
Mutero wekubhejera muSouth Africa
Zvinobviswa mubhajeti yenyika zvinofungidzirwawo mumamirioni emadhora. Muna 2015, zviremera zveSouth Africa zvakagamuchira $ 262 mamirioni kubva kubhizimusi rekubhejera. Izvi zvinoumba 28% yemari inowanikwa mari yekubheja zvivakwa.
Kubviswa kwemitero kunosanganisira zvitatu zvekubhadhara:
Mutero wemubatanidzwa unounganidzwa kubva kumakambani. Kukosha kwayo kunoenderana nemari inowanikwa nekambani;
kubhejera mutero - inounganidzwa kubva kune vane marezinesi nevakuru vematunhu. Iko kukosha kunoverengerwa zvinoenderana nemari yakazara yevanobvumidza marezenisi;
kukosha kwakawedzera mutero - inoverengerwa pahwaro hweiyo kukosha kwakawedzerwa padanho rega rekugadzira uye kuchinjana zvinhu uye masevhisi. Inobhadhariswawo kune kasino, kwete kune vatambi.
Kubhejera bhizimusi online muSouth Africa
Kunyangwe paine chokwadi chekuti kubhejera online muSouth Africa kwakarambidzwa, vese vatambi pachavo vanokwanisa kushandisa masevhisi emakinasi epasi rese. Vatambi vanogona kuisa mari yemuno mari, izvo zvinoita kuti basa rireruke. Asi pane imwechete nuance: kubva Gumiguru 4, 2016, zviremera zvinogona kutora kuhwina kwevatambi vepamhepo. Dhipatimendi Rekutengesa neindasitiri rakaburitsa chigadziriso chitsva cheNational Gambling Amendment Bill, zvinoenderana nekuti, dare rine mvumo yekutora nekusunga vatambi vakahwina.
Nekudaro, iwe unogona kutamba online - asi kwete iyo chokwadi chekuti iwe unogona kuwana ako kuhwina, nekuti kunyangwe kutengeserana mukati menyika hakubvumidzwe.
Mitambo yeCasino pamhepo, bhingo uye marotari asina kupihwa marezenisi zvakarambidzwa muna 2010, apo dare redunhu reGauteng rakarambidza kasino yepaInternet Swaziland Based Pigg Peak. Iyo yekutanga yakasikwa, uye kubvira ipapo ese epamba online macasino akarambidzwa zvachose.
Mhando nhatu chete dzekubhejera dziri mumutemo ndezvepamutemo:
purogiramu yepaIndaneti yenotora yenyika;
kubheja pamabhiza emabhiza.
Zvese zvimwe zvinosanganisirwa mune inonzi "grey musika". Zvinosara kuti zvionekwe kana hurumende ichizoramba ichitarisa kubvumidzwa kwebhizimusi repamhepo kana kwete.
Bill Remote Kubhejera Bill
Kwechimwe nguva, Bill ye Remote Remote yeMari, iyo inogona kutonga kubhejera muIndaneti muAfrica, yakakurukurwa.
Mutemo weBudge Remote Gambling Bill unofungidzirwa:
muwandu wemubairo nemikomborero;
mutoro wemapurovhinzi uye National Board;
mitemo yeInternet casino equipment;
nyaya dzekudzivirira kodzero dzevatambi.
Mutemo, somuenzaniso, wakaraira mienzaniso inotevera:
vakadzivisa kutamba vana;
vakadzivisa chikwereti kune vatambi;
kunogumira miganhu yekutengeserana uye kubudiswa kwekambani yepaIndaneti.
Muna May 2016 basa reRote Rokubhejera Bill rakarambwa.
Vamiririri veDhipatimendi reMabhizimisi neZvashandi, iyo inobatanidzawo nemabhizimisi ezvevaraidzo, vanotenda kuti chikwereti chacho chinonyatsotarisira matambudziko emagariro evanhu anowanzobatana nekutambera kubhejera.
Apo bhiri racho raifungidzirwa musi waMay 27, 2016, nhengo ye National Liberation Party Shaik Emam (Shaik Emam) akatsigira kubvuma mutemo uyu:
"Basa revanhuwo zvavo rakaparadzwa nekuti vanobvumidza machena machena kuvhara kurasikirwa kwavo ivo vachishandisa."
Aya ndiwo mafungiro ehurumende. Muchokwadi, kune chakasimba chakasimba nzvimbo yekutandarira yepasi-yakavakirwa makasino asingafarire chokwadi chekuti mawebhusaiti anotora vazhinji uye vazhinji vatori vechikamu kubva kwavari. Vanopikisa bhiri vanoonekwa, semuenzaniso, pamabhizimusi epamhepo muEurope: mawebhusaiti akasarudzwa neanosvika makumi maviri muzana evashanyi kumakasinasi ekunze.
Mutevereri webhadhiro uye mumiriri weDemocratic Alliance, Geordin Hill-Lewis (Geordin Hill-Lewis) funga izvi zvakakanganisa:
“Mutemo wemaindasitiri ndiyo nzira yakanakisa yekuchengetedza veruzhinji. Iyo 2008 National Kubhejera Amendment Mutemo hauna kutambirwa kusvika parizvino. Nekuda kweizvi, online kubhejera kunotambura nekuvhiringidzika. ”
Vatsigiri vekunyoreswa kwepamhepo kwebhizinesi kutungamira uye nharo dzakadai: hurumende inorasikirwa nemamirioni emadhora, isiri pamutemo webhu-kasino. Iyo Association of Casinos yeSouth Africa (Casino Association of SA) inodudza nhamba dzakadai:
“Nyika inorasikirwa nemari inosvika ZAR 110 miriyoni (USD 7.8 miriyoni) kumakasinasi epamhepo asiri pamutemo. Panguva imwecheteyo, mutemo une hukasha wemakasino epamhepo unoita kuti masangano epasi arasikirwe nemari. Iko kuwana mune purofiti kwakanonoka kusvika ku0.6%. ”
Parizvino, nyaya ine bhizinesi repamhepo inoramba isina kugadziriswa. ”
Best casino online kuSouth Africa
Pasi pane urongwa hwemakambani eInternet apo inoratidziro inobvumira vagari vekuSouth Africa kutamba nezvose zvinobatsira:
Online slot machines muSouth African casinos
South African casinos inowanzozivikanwa nemavhidhiyo mashanu emitambo inowanikwa munzvimbo dzepaIndaneti:
Munhu wese Jackpot;
Kuwanda kwekubhejera muSouth Africa
Maererano neNational Gambling Board mu2016, 15.3% yevanhu vose vanogara vachibhejera.
Kwemakore mashanu pakanga paine kuderera kushoma muhuwandu hwevatambi mukasino, bingo, kubheja uye LPM chikamu. Asi kutengwa kwetikiti kumatunhu ehurumende kwakawedzera.
Somuenzaniso, muna April 2015, nhamba dzinotevera dzakaonekwa:
78.9% yevatambi vakatenga matikiti ejotori ehurumende;
11.2% kutamba makadhi-makadhi;
10.6% - mukasino;
7.1% - marotari akazvimirira;
6.2% - kumhanya kwemabhiza uye kubheja kwemitambo
0,4% - bhingo;
17.5% vari kuita zvekubhejera zvisina kukodzera.
Mitambo yepamutemo yekubhejera inozivikanwa mumasangano asina marezenisi uye pamakasino epamhepo. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mumakore mashoma apfuura huwandu hwevatori vechikamu mukubhejera zvisiri pamutemo wakadzikira. MunaNovember 2012, 41% yevatambi vakatamba zvisiri pamutemo. Iye zvino muna 2015-2016 - chete 17.5%.
Kubhejera kunozivikanwa chete 9.9% yehuwandu hwevatambi. Vamwe vatema vakatanga kutamba -19.8% muna 2015-2016. Huwandu hwevatambi, vane zera rinobva pamakore makumi maviri nemashanu, huri kuwedzera.
Izvo hazvisi zvachose chiri nyore basa rekusarudza akanakisa online bhasino yeAustralia pane yekupihwa. Kubva panguva ino inotungamira online kubhejera software vagadziri vauya kumusika wenyika ino inoshamisa mukwikwidzi mumunda wave wakanyanya. Ndokusaka isu takaita maawa mazhinji tichitamba blackjack, roulette, online pokies, vhidhiyo poker, slots mitambo uye iyo mimwe mitambo vanobhejera vanowanzosarudza mumakinina akasiyana evatambi veAustralia. Saka kuti tigone kutaura zvatakafarira uye zvataisifarira mune dzese dzepamhepo online kasino AU saiti uye taigona ikozvino kuraira pane yakanakisa yeAustralia online kasino kasino pazviri zvatiinazvo.
Best paIndaneti kasino Australia ane zvavanokwanisa
Apo takasarudza kuwana yakanakisisa paIndaneti casino Australia inopa kupa isu taida kungoponesa nguva yevatambi. Saka kuitira kuti vashanyi venzvimbo yedu vasazofanira kuramba vachitsvaga muAU online online casino site iyo yaizozvifananidza navo, asi sarudza imwe kubva pane zvatinyorera uye tatanga kutamba mitambo mikuru pakarepo. Uye kunyange zvazvo basa racho rakanga risati riri nyore, takasarudza makasitasi akawanda anoenderana nemitemo yedu yakawanda.
Nzira yatakashandisa yakanga isiri yakaoma zvakare. Chokutanga pane zvose takabhadhara zvakanyanya kunaka uye huwandu hwemitambo imwe neimwe casino yeInternet yevatambi veAustralia ine. Zvimwe zvakasiyana-siyana zvemasikiti, roulette, blackjack, video poker, pokies online, uye mamwe mitambo yekaseino zviri nani.
Zvadaro, panewo mabhonasi. Zvinonyatsokosha kuti dzakawanda izvi ndezvipi uye ndezvipi zvakakwana. Mamwe mabhonasi anogamuchirwa ndizvo zvinowanzoitwa nevatambi pavanotanga kupinda nekambani yeInternet uye iyo inokosha kukosha. Asi haifaniri kunge iri iyo chete inofadzawo zvakare. Mamwe marudzi ose emabhonasi anofanirwa kuverengwa. Uye sezvo kukurudzirwa kunogonawo kubatsira mukuwedzera mabhengi ebhengi takaongorora zvavari uye kuti vanochengetwa nguva dzose. Hapanazve nguva inopera
Hazvina maturo kutaura kuti chimwe chezvinhu zvinokosha kune chero muteereri ndechokuti zviri nyore sei kuisa mari yacho kumusinoti uye kubvisa mari yacho. Iko kushandiswa kwebhangi kunofanirwa kuve kwakasiyana uye kwakakosha kune vashanyi venzvimbo yakanaka yepainstin online. Uye kana zvasvika kumakanhasi eInternet kune vatambi veAustralia neNew Zealand vanofanirwa kunge vane mukurumbira wePoli e-chikwama pamwe chete nemadhidhi ekubhadharira, makadhi emakwereti pamubhadharo wavo wekubhadhara muIndaneti. Kunyanya, kuchengeteka kwekutengesa kwebhangi kunofanirwa kuva chinhu chikuru chepamusoro pekambani yakasarudzwa yaunosarudza.
All mune zvose tine pano ndandanda pamusoro yakanakisisa paIndaneti dzokubhejera kuti Australian vatambi. Saka zvino hakungavi chikonzero kuti kupedza nguva paindaneti nokuda yakanakisisa playing site, sezvo unogona kunhonga mumwe wevaya tinopa uye kupedza nguva achitamba kufarira mitambo yenyu pachinzvimbo. Kuti kutsvaka kunyange yamunenge iwe hatina akaparadzanisa dzokubhejera muzvikamu kuti inosanganisira somuenzaniso vane zvikuru bonuses, avo kuti mupe widest kusarudza paIndaneti pokies uye zvichingodaro.
Kushandisa nhungamiro yatinayo pakero redu iwe uchakwanisa kutanga kubhadhara nekukunda mumaminitsi. Uye sezvo vazhinji vanonyora mabhuku akapa mapurogiramu emitambo yakagadzirirwa madivayiri eAroid pamwe chete nePhones uye iPads yemitambo inogona kutambidzwa chero nguva uye munzvimbo ipi zvayo chero bedzi uine internet connection.
0.1 Rwokutanga rwe10 South Africa Online Casino Sites
2.1 Tsanangudzo pfupi yeSouth Africa
2.2 Nhoroondo yekubheja muSouth Africa
2.3 Mutemo wekubheja muSouth Africa
2.4 Vatongi vekubhejera muSouth Africa
2.6 Mutemo wekubhejera paIndaneti muSouth Africa
2.7 Mitambo yekubhejera muSouth Africa
2.8 Mitsva inobva kubheja bhizinesi muSouth Africa
2.9 Mutero wekubhejera muSouth Africa
2.10 Kubhejera bhizimusi online muSouth Africa
2.11 Bill Remote Kubhejera Bill
2.11.1 Best casino online kuSouth Africa
2.11.2 Online slot machines muSouth African casinos
2.12 Kuwanda kwekubhejera muSouth Africa
2.14 Best paIndaneti kasino Australia ane zvavanokwanisa
rombo rakanaka dhiza bhasino makodhi